DHAGEYSO+WARBIXIN:CURYAAMIIN KU NOOL BAYDHABO OO NOLOSHOODA KA SOO SAARTA BEER AY KU SHIRKOOBEEN | warsanradio baydhabo
Somalia:-Jubbaland security forces briefly detain TV journalist over...
Dhageyso:-Xaafadaha Daarasalaam (A) iyo Wadajir (B) oo habeenkii...
Akhriso:-Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay...
Home ARIMAHA BULSHADA	DHAGEYSO+WARBIXIN:CURYAAMIIN KU NOOL BAYDHABO OO NOLOSHOODA KA SOO SAARTA BEER AY KU SHIRKOOBEEN
DHAGEYSO+WARBIXIN:CURYAAMIIN KU NOOL BAYDHABO OO NOLOSHOODA KA SOO SAARTA BEER AY KU SHIRKOOBEEN
written by siid cali ateera 20/10/2016
Baydhabo(WRB)Lix iyo labaatan qof oo naafo ah oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa nolosha qoysaskooda ka soo saarta beer ay shirko ku yihiin oo ku taalla duleedka magaaladaas. Dadkan ayaa beerta oo afar hektar ah uga maarmay ku tiirsanaanta kaalmo ay bulshada ka heli jireen. Basal ay labo bilood ka hor tacbadeen ayaa diyaar u ah inay toddobaadkan goostaan oo ay suuq-geeyaan.
Beerta oo lix sano jirta wuxuu wax-soo-saarkeeda kobcay labadii sano ee la soo dhaafay, markaas oo ay soo kireysteen matoor si uu biyaha uga soo saaro mid ka mid ah labo ceel oo beerta ku yaalla, sida uu Raadiyo warsan u sheegay Mukhtaar Cali Isxaaq oo ah guddoomiyaha curyaamiintan shirkada ah. Laakiin sanadihii hore roob-yari ka jirtay gobolka ayaa baabi’ineysay dalag kasta oo ay isku dayeen inay tacbadaan. “Markii aan dhowr mar ku khasaarnay oo ay qallaleen galley, masaggo iyo sisin aan abuurannay ayaan go’aansannay markii aan matoorka helnay inaan khudaar u wareejinno,” ayuu yiri.
Maxamed Aadan Xasan oo ka mid ah curyaamintan ayaa Raadiyo warsan u sheegay in qof kasta oo iyaga ka mid ah uu saami ahaan u helo $20 mar kasta oo khudaarta soo go’da loo iibgeeyo suuqa Baydhabo. Toddobaad kasta mar ayay suuqa geeyaan khudaarta oo degdeg ku baxda, loona beerto in dhaqaale laga helo.
Si kastaba ha ahaatee Maxamed oo sharraxaya sida ay beertan wax uga beddeshay noloshiisa ayaa yiri “beertan ka hor waxaan aniga iyo qoyskeyga ku jirnay nolol adag oo kaalmo ku tiirsan. Way adkeyd in hal waqti xitaa dabka loo shido carruurta ama ay joogto iskuulka u tagaan. Balse hadda nin isku filan baan ahay, saddexda waqti waan cunnaa, afar carruurteyda ka tirsanna waxaan bil kasta joogto uga bixiyaa $24 oo ay iskuulka ku dhigtaan,” ayuu yiri. Labo xaas iyo sagaal carruur ah ayuu leeyahay.
Maxamed waa 39 jir ah xoolo-dhaqato ahaan jiray intii aysan horay abaar u ceyrteen. Dagaal Baydhabo ka dhacay 18 sano hor ayuu ku lugo beelay, wuxuuna hadda ku boodaa biro. Kooxda ay shirkada yihiin oo sagaal ka tirsan ay haween yihiin wuxuu u qaabbilsan yahay ka baaraan-degidda noocyada dalagga ee la beerayo ee markaas suuqa leh.
Beertan waxay sidoo kale shaqo u abuurtay dad aan naafo ahayn. Shan qof oo midkiiba uu bishii qaato $50 ayaa ka shaqeysa. Kooxda milkiyaddeeda lehna waxay marka ay ugu fiican tahay ka helaan lacag $2,000 oo qeyb dib loogu celiyo beerta, inta kalena ay iyaga iyo shaqaalaha qeybsadaan.
Mukhtaar ayaa sheegay in hay’adda Fursad Fund oo dhaqaale-ururin Soomaalida dhexdeeda ka sameysa ay rajo badan u abuurtay si ay u kobciyaan wax-soo-saarkooda, kaddib markii ay ku maalgeliyay $6,000 oo ay geedo-goyn iyo carro-geddin ugu sameysteen saddex hektar oo beerta ka mid ah oo howd ahaa. Waxay sidoo kale deeqdaas uga faa’ideysanayaan dhisme hadda socda oo lagu sameynayo barkad u keydisa biyaha roobka iyo dayactirka mid ka mid ah ceelasha oo biyo-yareeyay.
Dhulka ay beertan ku taallo oo howd ahaa waxaa iibkiisa iyo hagaajintiisa uga baxday lacag $40,000 oo Mukhtaar uu sheegay inay isugu jirtay deyn iyo mid ay ku caawiyeen qurbejoog iyo ganacsato. Lacagtaas ayuu tilmaamay inay inteeda badan bixiyeen, $5,200 oo hartayna ay rajeynayaan inay u magaan si tartiib ah.
W/Q/Wariye:Muxidiin Xasan Maxamed (Xusni)
DHAGEYSO+WARBIXIN:CURYAAMIIN KU NOOL BAYDHABO OO NOLOSHOODA KA SOO SAARTA BEER AY KU SHIRKOOBEEN was last modified: October 20th, 2016 by siid cali ateera
Dhageyso:Warka Hebeen 19-10-2016
Dhageyso:-Xalad Cafimad Daro ka Jirto Qeeb Kamid ah Gobolka Bakool Gaar Ahan Deganka Burdhuxunle ,,
DHAGEYSO: Gaari ay la socdeen xubno Shabaab ka tirsan oo ku qarxay Gobolka Bakool
Dhageyso:Maxamanada Ciidamada Qalabka Sida ee soomaaliya ee Qeybteeda 6aad ayaa manta Xukun Xabsi Ciidan ah kuriday 4 dhalinyaro oo Sheegtay in ay katirsanyihiin Koxda Daacish
Dowlada Mareykanka Oo Markale Kahadashey Doorashada Dalka somaliya
DHAGEYSO: Wasiirka Difaaca oo ka hadlay ammaanka Cadaado
(Dhageyso+Sawiro)Maamulka Degmada Baardheere oo Dhagax dhigey Afar Mashruuc oo lagu horomarinayo Deegaanka
Dhageyso:- Warka Cawwa Ee Warsan Radio
Dhageyso:-Wareysi xasaasi ah ee aanu la yeelanay Gudoomiyaha Olympic Ku Sugan Degmada Buur Hakaba>>